I-PostgreSQL ingathatha indawo ye-MySQL - Geofumadas
I-PostgreSQL ingathatha indawo ye-MySQL
Agasti, 2009 Geospatial - GIS
Umba entsha ye PC Magazine, ngoku ayisashicilelwa kodwa ukuqwalasela isiphelo oqhelekileyo uwuse kwi Zinio uzisa iingcinga umdla ukuhlafuna phezu futbolera irabha ngoLwesine.
Ndatshitshiswa ngesihloko esithi ngesiSpanish sicacisa Yintoni engalunganga ngeLAMP? ukubhekisela (i-Linux, i-Apache, i-MySQL kunye ne-PHP), iinkqubo ezininzi ezisekelwe kwimpumelelo ye-Intanethi.
Kule nqaku nguJohn C. Dvorak wenza uhlafuna phakathi kweengozi ezithatha i-MySQL ukufumana yi Sun / Oracle kunye utshintsho balusa mvume GNU GPL. Phakathi imigca umbhali ubanga ukuba ingxaki kwiilayisenisi free nezimiso kodwa yorhwebo, Andindululi ukuba ukuze ube ezinzileyo ngokuhamba kwexesha. Nangona ziyingozi, hayi ngaphandle kwesizathu xa sikhumbula ukuba injini oovimba zethu lomhlaba ekhethwayo (PostGIS), nto leyo lithathelwe usebenziso kwimeko GIS yaba uqhomfo botched ngeminyaka 8 njengoko Postgres kodwa ngoku ethembisa kakhulu njengoko PostgreSQL (kodwa nelayisensi ye-BSD).
Abanye abahlobo geofumados, xa Ndikwachaza GPL look at kum njengoko babenjalo ngaphambi umfanekiso 'engekazalwa' ngenxa wadana ukuba yonke into ayenzayo wayeza kuba domain loluntu; kodwa inkxaso mvume BSD abathi bona 'inkululeko epheleleyo' njengoko umbhali umsi kuye inkululeko kangangoko abahlali yokunikela okanye athengise iinzame zabo nge-mvume zabucala. Kuba baninzi umba kunokuba ziyintlekisa kule ndawo baye basinda amabango ezinzulu kunye nabameli babo kuye kwafuneka ukuba ufunde lukhulu kwethekhinoloji ukufunda ngokupheleleyo ukuqonda iingozi umxube phakathi domain karhulumente wezindlu.
Dvorak uphosa ezinye izivakalisi mpilweni Oracle, ngubani na ukuba ndibe ndifuna ubomi jorobarle abaninzi abaye sele imali kwi isiseko data web kakhulu ethandwa. Ke iqinisekisa ukuba PostgreSQL wayeza kushenxisa mvume BSD kwaye ikhulisa apho sifuna ukubona. Ngaphandle kokwenza impazamo okuncinane (PostgrSQL umbiza), ndakufumanisa umdla, mhlawumbi nathi ukususela kwicala sithuba, ngoko Singenelwa umdla yethu PostGIS ukuba sele wahamba kakuhle.
Iphephancwadi linokukhangela kwiZinio. Ngaphandle koko, balethe amanqaku anomdla anjengoku:
Xa intsalela engenakwanela
Ubungozi beCraiglist kwizabelo zabo zesondo
I-iPad ye-Apple ingayibulala i-Amazon Kindle
Facebook vs. I-Twitter
Isikhokelo esingabalulekanga se-Gmail
Kwinguqu yeSpain, uNadia uthetha ngomdlalo, kuhle kakhulu.
Post edlulileyo«Edlulileyo Ubunjineli, i-GIS kunye noLawulo lweNgingqi: Iikhosi ezisondelayo
Post Next Ukuthengisa isofthiwe kwi-Intanethi yonke imihla kululaOkulandelayo "
Iimpendulo ze-2 "I-PostgreSQL ingathatha indawo ye-MySQL"
Ndivuma kakhulu, nangona imbambano inengxabano kumbono woshishino kunye nomthetho
Oko BSD kunye nenkululeko epheleleyo ... ngokufutshane, bekusoloko kwabonakala Mars bathi GPL osusa inkululeko. Umda kuphela GPL inyanzelisa othintela abantu ekubeni linyanzele eminye imiqathango.